Yini eyenza ubuso ekhululekile futhi kungaba kakhulu uguqule? Yiqiniso, sikhuluma amashiya. Isimo sabo kanye ukushuba kungaba ngokuphawulekayo ukushintsha sobuso, ukwenza kukhanga, iyinhle noma iyimbi, odabukisayo noma bajabule. Kodwa amashiya ezingacacile noma cha uzilungise ezingonakalisa umbono ngisho namehlo amahle kakhulu noma ekhaleni kwesokudla. Ziningi izindlela ukugcizelela noma ukuguqula umugqa zemvelo. Ngokwesibonelo, mikrobleyding amashiya. Hlobo luni ubuchwepheshe, futhi obani kufanelekile?
A ehlukile njengabakufanelekele ukuhlaziswa okudweba
Eminyakeni ethile edlule, ukusabalala amazing nokuduma wathola emzimbeni noma makeup unomphela. Lobu buchwepheshe yokusebenzisa sombala ibala lesikhumba, okunye emzimbeni egcwele. Nokho, ukusebenzisa ekhethekile tattoo izinaliti futhi imishini lapho upende lasetshenziswa the isikhumba ngokujula elikhulu. Yazenzela eside ukwakheka iminyaka eminingi, ngemva kwalokho-ke kungenzeka kwenziwe futhi. Nokho, okudweba kwadingeka inezici ezithile ezingathandeki. Lena ngokuyinhloko isikhathi eside sokuphulukiswa, ubuhlungu ukwelashwa. Akunjalo kudala, nokucwala eziningi zinikeza steel yayo amaklayenti mikrobleyding amashiya. Hlobo luni inqubo? It wathola igama layo kusukela English Microblading - «mikrolezvie". Kwaba njalo ngempela, sikhuluma mayelana nobuchwepheshe ezincane kakhulu. Upende sisetshenziswa ngaphansi kwesikhumba nge izinaliti mncane kakhulu ngesandla. Master udonsa njalo izinwele noma ukwenza ukukhanya Ukufiphaza, ukukwazi ukulawula ukunyakaza kwabo kuyo yonke inqubo. Ngenxa ezifana isaziso imininingwane ukubulawa mikrobleyding cishe kungenakwenzeka. Amashiya bheka zemvelo, ngisho noma ukude izinyathelo ezimbili.
Ngaphambi ukulungiswa Master ngokuvamile ucela sikhule amashiya engokwemvelo, kwanele hhayi basuse amashiya akhe amasonto amabili futhi ungasebenzisi noma yiziphi izindlela ukuze asuse izinwele engadingekile. Mikrobleyding amashiya Petersburg nakwamanye amadolobha amakhulu ukunikela abaningi beauty salon. Kusengaphambili ukwenza aphoyintimenti esikhungweni elimnandi futhi uthole izincomo erhubhululweni uchwepheshe. Inqubo iqala isicelo isidambisa-zinhlungu, ngokuvamile ngesimo ijeli. Ngalesi sikhathi, ungakhetha ncamashi ukuma okulungile, inkosi yayo udonsa ngokusebenzisa induku nge izifiso iklayenti. Ngemva kwalokho akhethiwe umbala oyifunayo futhi lo mbala busuka isikhumba usebenzisa thinnest inaliti zalutho. Isikhathi inqubo kusuka imizuzu 40 amahora ama-2, bonke kuncike ubuchwepheshe ekhethiwe (izinwele noma isithunzi) kanye endaweni-imidwebo.
Izincomo zokunakekelwa ngesikhathi ukuphulukiswa
I rapidity sokuphulukiswa - ukuthi lokhu eqhathanisa kahle ubuchwepheshe obusha kusukela tattoo zakudala. Ngokushesha ngemva kokuhlinzwa, kungenzeka ukuvuvukala kancane endaweni ziphathwe, kodwa ngosuku olulandelayo uyahamba benganakwa muntu. Uma unquma ukwenza mikrobleyding amashiya, ukuphulukisa kuyokwenzeka cishe kungabonakali. Akukwazi ukuba luhlaza futhi ngamapiki ukuvula KLWEBHEKA isikhumba, kwakheka ezinsukwini zakuqala ifilimu cishe ezingabonakali kuso, okuyinto ke uqobo uzonyamalala. Lahla okugeza sauna, solarium ukuqedela ukuphulukiswa. It is ibuye Kunconywa ukuba ugweme imisebenzi bomzimba futhi ukubhukuda endaweni evulekile amanzi namadamu okubhukuda. Ukusiza ngokushesha ukubuyisela isikhumba ngangokunokwenzeka, ziphatha ishiya wamafutha "Bepanten" noma omunye analogue yayo. Qiniseka ukuthi uthintane beautician futhi uthole ukhetho best for ukunakekelwa endaweni elimele.
Lapho sekuyisikhathi sokuba alungise ngabe mikrobleyding amashiya? Kuyini - inqubo saziso?
Iningi labesifazane ababebe nesibindi sokuba ngcono ukuma amashiya indlela yesimanje kunazo, enze ukulungiswa emva kuseshini main. Cishe ezinsukwini 30-50 emva kokwelashwa yi Bangalinganisa futhi ukukulungisa kancane kuzuzwe nomphumela lemvelo. Ngokuvamile, noma ngabe okuqoshiwe master uxwayisa ngokuthi uma ukhetha mikrobleyding ishiya ukulungiswa, kungenzeka kudingeke. Nokho, akudingeki ukuba besabe. Ukulungiswa sivame akukho imizuzu engaphezu kuka-20 futhi izindleko akuyona ezibizayo. Kungakanani kugcinwa mikrobleyding? Pigment buphela, bese ukuboniswa ngokugcwele ezinyangeni ezingu-11-18. Ithemu ngabanye kanye kuncike izici udayi futhi isikhumba iklayenti. Kubalulekile ukuqonda ngaphambi kokukhetha amashiya mikrobleyding ukuthi le nqubo uziphatha ngobumnene umphumela ibingaba eyesikhashana ngempela. Uma umphumela ujabulele, sesondlo yayo njalo ukulungiswa uzodinga ukwenza okungenani kanye ngonyaka.
Umzila wokuhamba: yini okufanele ubuke uma ukhetha?
Chartreux okwesibhakabhaka British - izihlobo behlukaniswe